Auto Electrician Training In Automobile Sector
अटोमोबाइल क्षेत्रमा सिप्रदीले अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गर्दैछ 10 January 2020
बढ्दो आधुनिकता र सेवा सुविधा उपभोगी समाजको विकाससँगै पछिल्लो समय बजारमा अटोमोबाइलको माग बढ्दै गएको छ । हिजोसम्म मान, प्रतिष्ठा र इज्जतसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आज आवश्यकताको उपजका रूपमा लिन थालिएको छ । त्यसो त विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगति र समृद्धिको आधारसमेत अटोमोबाइल र सडक सञ्जाललाई नै लिइएको छ । त्यसैले आजभोलि बजारमा अटोको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
यातायात व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा मात्र आजको दिनमा ४० लाखको हारहारीमा सवारी साधन पुगिसकेको छ ।
आजको दिनमा विश्व बजारमा उत्पादित एकसे एक अटो उत्पादनले नेपाल प्रवेश पाइरहेको छ । अटो व्यवसायीहरुले दोस्रो, तेस्रो मुलुकहरुबाट उच्च टेक्नोलोजीमा आधारित सवारी साधनहरु नेपाल भित्र्याइरहेका छन् । तर नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको बिडम्बना आधुनिक टेक्नोलोजीसँगै सोही अनुरूपको वर्कसप सेवा तथा सर्भिसिङ सेवालाई बढवा दिन सकिरहेका छैनन् । बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । गाडीको टेक्नोलोजी अनुरूपका वर्कसप मेनपावर ९कामदार० तयार गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अहिले सवारी साधनको माग र प्रयोगभन्दा पनि सवारी साधनको व्यवस्थापनको विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समेत अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल भएको छ ।
नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको अग्रणी संस्था टाटा मोटर्सका लागि एक मात्र अधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले अटोमोबाइल क्षेत्रको प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गर्ने बजारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपालमै अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गर्दैछ । के हो त अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम रु यसमा ककसले भाग लिन पाउँछन् रु आउनुहोस् हेरौँ सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका एचआर हेड सारदा रानासँगको यो वार्ता:
टाटा मोटर्सले प्राविधिक तथा व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गर्दै छ । यो कस्तो खालको तालिम हो रु यसबाट कोको लाभान्वित हुनेछन् र?
हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेको तालिम विशुद्ध प्राविधिक ९टेक्निकल० तालिम हो । यसमा समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको प्राविधिक पक्षको सिकाइ हुन्छ । बढ्दो आधुनिकतासँगै पछिल्लो समय अटोमोबाइलमा आएको परिवर्तनसँगै आज उच्च टेक्नोलोजीमा आधारित गाडी आइरहेका छन् । उच्च टेक्नोलोजीसँगै आएको गाडीको नवीनतम प्रविधि अनुरूप सर्भिस सेवा सञ्चालन गर्नु आजको चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा अटो व्यवसायीहरुका लागि प्राविधिक सेवा सर्भिसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी थपिएको छ ।
अटो प्राविधिक तालिम तपाईंहरुको एकल पहलमा भएको हो कि कुनै सङ्घ संस्था वा निकायसँगको पहलमा हो रु यस किसिमको तालिममा कोको समावेश हुन पाउँछन् र?
१८ वर्ष पूरा भई २५ वर्ष ननाघेका जोकोहीले दर्खास्त दिन सक्ने छन् । सीमित सिटमा लिइने यस कार्यक्रमका लागि टीएसएलसी उत्तीर्ण गरेको वा औपचारिक शिक्षामा १० कक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिबाट अटोमोबाइल विषयमा लेभल वानरलेभल टु उत्तीर्ण गरेका इच्छुक व्यक्तिहरुलाई तालिममा सहभागी हुन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । यस्तो प्रावधान राख्नुमा प्राविधिक पक्षको तालिम भएकाले कम्पनीले शिक्षित व्यक्तित्व खोजेको हो ।
प्राविधिक पक्षसँग जोडिएको यस्तो तालिम सिप्रदीले पहिलो पटक सञ्चालन गर्न लागेको हो कि योभन्दा पहिला पनि यस्तै कुनै तालिम सञ्चालन गरिसकेको छ र?
यसभन्दा अघि सञ्चालन गरिएका तीनवटा तालिमहरुले कस्तो खालको उपलब्धि हात लाग्यो रु अहिले कस्तो खालको अपेक्षा राख्नुभएको छ नि र?
तालिमपछि प्रशिक्षार्थीका लागि कुनै जब ग्यारेन्टी छ र?
तालिमको उद्देश्य बजारमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । उत्पादनपछि जो जहाँ पनि जान सक्छन् । जुन जनशक्तिहरुलाई काम लाग्न पनि सक्छ र हामी आफैलाई काम लाग्न पनि सक्छ । यो तालिमलाई यसरी बुझौँ प्रशिक्षार्थी वा आवेदकको छनोट कसरी गर्नुहुन्छ र?
अहिलेको समय प्रतिस्पर्धीको युग हो । जुन क्षेत्रमा जो सक्षम हुन्छ उसैले अवसर पाउने हो । तर यसो भन्दैमा बन्देज हुँदैन । अटो इलेक्ट्रिसियन तालिमका लागि हामीसँग सीमित सिट छ । ६ महिने कोर्सका लागि जम्मा १० जनालाई तालिम प्रदान गर्दै छौँ । त्यसमा बेसिक कोर्सदेखि इन्टरमिडिएट र डिप्लोमासम्मको कोर्सको सिकाइ हुन्छ । यसका लागि उपयुक्त प्रशिक्षार्थी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले शैक्षिक कन्डिसन ९प्रावधानहरु० राखेका छौँ । त्यसबाहेक अन्तरवार्तालाई पनि प्रशिक्षार्थी छनोटको आधार बनाएका छौँ । यदि तालिमका लागि आवेदन माग गरेभन्दा बढी परे मात्र यसो गरिनेछ ।
तपाईंसँग लामो अटो अनुभव छ । करिब दुई दशक अटोमोबाइल क्षेत्रमा नै विताइसक्नु भएको छ । अहिलेको समग्र अटोमोबाइलको सिनारियोलाई कसरी अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ र?
(In conversation with Ratopati)